Oscilloscopes kacha mma maka ọrụ eletrọnịkị gị | ngwaike efu
Oscilloscopes kacha mma maka ọrụ eletrọnịkị gị
Isaac | 06/05/2022 09:00 | Emelitere ka 08/03/2022 13:04 | Ihe eletrọniki
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọ ụlọ nyocha eletrọnịkị, Otu n'ime ngwaọrụ ndị dị mkpa na-ekwesịghị ịdị na-efu bụ oscilloscopes. Na ha ị nwere ike ọ bụghị naanị na-ụfọdụ nha dị ka ya ndị polymer, mana ị ga-ahụkwa nsonaazụ eserese na akara analọgụ na dijitalụ. Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime ndị kasị ọkachamara na-eji ngwá ọrụ na electronic laboratories, na ebe a anyị ga-egosi gị ihe kpọmkwem ọ bụ, otú ị na-ahọrọ ndị kasị adabara gị, na anyị na-akwado ụfọdụ ụdị na ụdị na kasị mma uru maka ego.
Agbanyeghị na ọtụtụ n'ime oscilloscopes ndị a enweghị nkwado gọọmentị maka sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ dị ka Linux, nke bụ eziokwu bụ na enwere ọrụ ga-enye gị ohere iji ya n'elu ikpo okwu a, dị ka. Mepee Hantek maka Hanteks, DSRemote maka Rigols, ma ọ bụ nke a Ọzọ ọzọ maka Siglent. N'ihe banyere enweghị ọrụ nke ụdị a, ị nwere ike iji igwe mebere Windows na sistemụ arụmọrụ gị mgbe niile.
1 oscilloscopes kacha mma
1.1.1 Rigol DS1102Z-E (ọnụahịa kacha mma)
1.1.2 Rigol DS1054Z (oke etiti)
1.1.3 Rigol MSO5204 (kachasị mma maka ọkachamara ojiji)
1.2.1 Hantek 6022BE (dijitalụ dị ọnụ ala)
1.2.2 Hantek DSO5102P (oke etiti)
1.2.3 Hantek 6254BD (dijitalụ kacha mma maka ojiji ọkachamara)
1.3 Akara Silented
1.3.1 SDS 1102CML dị ntakịrị (nhọrọ dị ọnụ ala karịa)
1.3.2 Usoro SDS1000X-U dị ntakịrị (oke etiti)
1.3.3 Siglent SDS2000X Plus Series (kachasị mma maka ọrụ ọkachamara)
1.4 obere oscilloscopes
1.4.1 Usoro SHS800 dị ntakịrị (oscilloscope ejiri aka ọkachamara)
1.4.2 HanMatek H052 (ọnụahịa kacha mma maka ego)
2 Kedu ihe bụ oscilloscope?
2.1 Mpempe akara ngosi
2.2 Akụkụ Oscilloscope
2.3 Nchekwa Oscilloscope
4 Ụdị oscilloscopes
5 Otu esi ahọrọ oscilloscope kacha mma
oscilloscopes kacha mma
Ọ bụrụ na ịmaghị ngwaọrụ ị ga-azụ, ebe a ga-aga nhọrọ nwere oscilloscopes kacha mma kedu ihe ị nwere ike ịzụta. Ma enwere maka ndị mbido, ndị na-emepụta na ndị ọkachamara, nwere oke ọnụahịa dị iche iche. Maka nhọrọ a, ahọpụtara m ụdị 3 kachasị mma, na site na nke ọ bụla n'ime ha, a na-enye ụdị 3 dị iche iche: nhọrọ dị ọnụ ala ma dị ọnụ ala maka ndị na-amalite na ndị na-amụ ihe, ihe dị n'etiti, na nhọrọ dị oke ọnụ maka ndị ọkachamara.
Rigol DS1102Z-E (ọnụahịa kacha mma)
Rigol nwere ụfọdụ oscilloscopes dijitalụ kacha mma ị nwere ike ịhụ, dị ka ụdị ụdị dijitalụ a, nwere ọwa 2, 100 Mhz, 1 GSa/s, 24 Mpts na 8-bits. Na-enye ohere ibugharị na akụkụ ahọpụtara, ikike ịpịgharị, njikọ dị egwu, njide ebili mmiri na-agba ọsọ ruo 30.000 wfms/s, ike igosipụta na nyochaa ihe ruru 60.000 ụdị ebili mmiri edekọrọ. Ihe niile a na-ahụ anya na nnukwu ihuenyo agba 7 ″ nwere TFT panel na mkpebi WVGA (800 × 480 px), nchapụta na-agbanwe agbanwe, nha kwụ ọtọ sitere na 1mV / div ruo 10V / div, njikọ USB, nyocha 2 na eriri gụnyere, wdg. .
Rigol DS1054Z (oke etiti)
Nke a bụ otu n'ime oscilloscopes dijitalụ kacha mma. Rigol emepụtala ngwaọrụ dị egwu nwere ọwa 4 kama abụọ dị ka nke gara aga. Na njiri mara mma nke ukwuu, dị ka 150Mhz, 24Mpts, 1Gsa/s, 30000 wfms/s, yana inwe ihe mkpali, ngbanwe, nkwado maka ihe mkpali dị iche iche, njikọ USB, na ịkekọrịta ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ na nke gara aga, dị ka. ya 7 inch na 800 × 480 px mkpebi, ọnụ ọgụgụ ya, wdg. Ọ ga-akpaghị aka na-atụ ihe ruru 37 waveform parameters, yana ọnụ ọgụgụ na-ebili na oge ọdịda, njupụta nke ebili mmiri, obosara usu, okirikiri ọrụ, wdg.
Rigol MSO5204 (kachasị mma maka ọkachamara ojiji)
Rigol MSO5204 bụ ihe ọzọ oscilloscopes ọkachamara na-adọrọ mmasị. Ngwaọrụ a nwere ọwa 4, 200Mhz, 8 GSa/s, 100 Mpts na 500000 wfms/s. Ọ gụnyere ihuenyo mmetụ agba 9 ″ (ọtụtụ mmetụ), yana panel LCD capacitive, yana ngwaike dị egwu dị egwu. Ọ ga-ejide ma na-anọchi anya ọbụna nkọwa kacha nta. Ihuenyo a nwere mkpebi mara mma, nwere nkwụsi ike agba, yana ruo ọkwa 256 iji mezie. Ị nwere ike tụọ ihe ruru 41 dị iche iche ebili mmiri na ebe nchekwa. Na nke a, ị ga-enwe ike iji dị iche iche interfaces, dị ka LAN, USB, HDMI, wdg
Hantek 6022BE (dijitalụ dị ọnụ ala)
Hantek a dị ọnụ ala, dijitalụ, yana jikọọ site na USB na PC. Ọ naghị agụnye ihuenyo, mana ọ gụnyere ngwanrọ (gụnyere na CD) iji wụnye na Windows ma nwee ike iji ngwanro a mee ihe ngosi site na ihuenyo kọmputa gị. Emebere ya na aluminom anodized dị elu. Ọ nwere 48 Msa/s, bandwit 20 Mhz, na ọwa 2 (ezi uche 16).
Hantek DSO5102P (oke etiti)
Hantek ika oscilloscope ọzọ nwere ihuenyo agba, yana nha 17,78 cm diagonal yana mkpebi WVGA nke 800 × 480 px. Ọ nwere njikọ USB, ọwa 2, 1Gsa / s maka nlele oge, 100Mhz bandwit, ogologo ruo 40K, ọrụ mgbakọ na mwepụ anọ ịhọrọ site na, nhọrọ ọnụ / obosara obosara / ahịrị / slop / oge na-akpalite ụdịdị, wdg. Ngwanrọ PC nyocha ezigbo oge gụnyere.
Hantek 6254BD (dijitalụ kacha mma maka ojiji ọkachamara)
Hantek nwekwara ụdị ọzọ a, otu n'ime oscilloscopes kacha mma maka iji ọkachamara. Nhọrọ dijitalụ, yana njikọ USB, 250Mhz, 1 GSa/s, ọwa 4, ụdị ebili mmiri aka ike, ikike ntinye ya ruo 2 mV-10V/div, dị mfe iburu, dị mfe ịwụnye (Plug & Play), zuru oke. na ọrụ dị elu, nke ejiri aluminom anodized emepụtara maka casing, yana enwere ike ilele, chekwaa, na ịrụ ụdị ọrụ niile na ihuenyo PC ekele maka ngwanrọ ya.
SDS 1102CML dị ntakịrị (nhọrọ dị ọnụ ala karịa)
SDS 1102CML dị ntakịrị -...
Nke a ọzọ bụ otu n'ime ọnụ ahịa kachasị ọnụ ị nwere ike nweta n'okpuru akara Siglent. Ụdị oscilloscope ndị a nwere ihuenyo TFT LCD 7 ″ agba, yana mkpebi nke 480 × 234 px, interface USB, yana ngwanrọ PC iji lelee ma nyochaa ihe niile site na ihuenyo, 150 Mhz wide band, 1 GSa/s, 2 Mpts. , na ọwa abụọ.
Usoro SDS1000X-U dị ntakịrị (oke etiti)
Ọ bụ ihe atụ Siglent nke etiti, yana ọwa 4, ụdị dijitalụ, bandwidth 100Mhz, 14 Mpts, 1 GSa/s, ihuenyo TFT LCD nke anụ ọhịa 7 nke nwere mkpebi 800 × 480 px, super phosphor, yana ndị decoders maka ọtụtụ oghere. , dị nnọọ mfe iji ekele ya n'ihu panel, ọhụrụ usoro na SPO technology iji melite ikwesị ntụkwasị obi na arụmọrụ, elu uche, obere jitter, captures ruo 400000 wfmps, ike mgbanwe na 256 ọkwa, ngosi mode nke agba okpomọkụ wdg
Siglent SDS2000X Plus Series (kachasị mma maka ọrụ ọkachamara)
Ọ bụrụ na ịchọrọ Siglent maka ojiji ọkachamara, ihe nlereanya ọzọ a bụ ihe ị na-achọ. Ngwaọrụ nwere nnukwu ihuenyo mmetụ 10.1 inch iji nyochaa akara na data. Na smart mkpalite (ọnụ, mkpọda, pulse, window, runt, etiti oge, dropout, ụkpụrụ na vidiyo). Ọ nwere ọwa 4 na bits dijitalụ 16, bandwidth 350 Mhz, omimi ebe nchekwa 200 Mpts, izi ezi nke voltaji sitere na 0.5 mV / div ruo 10V / div, ụdịdị dị iche iche, 2 GSa / s, yana ikike maka 500.000 wfm / s, 256 nwere ike idozi ọkwa ike. , Ngosipụta okpomoku agba, teknụzụ SPO iji melite ntụkwasị obi, yana njiri mara elu.
Siglent Usoro SHS800 (oscilloscope ejiri aka ọkachamara)
Usoro SIGLENT SHS800...
Oscilloscope aka ọkachamara nwere ọwa 2, bandwit 200Mhz, omimi ebe nchekwa 32Kpts, Ngosipụta 6000 maka nha ziri ezi, eserese nke ihe ruru 32 Measurement, 800K Point Range, 24 Hour Record Time, na nnukwu nnwere onwe. Ọzọkwa, ọ nwere oge ndekọ nke 0.05 Sa/s.
HanMatek H052 (ọnụahịa kacha mma maka ego)
Oscilloscope pere mpe nwere ihuenyo 3.5 ″ TFT, nwere ọrụ multimeter (2 n'ime 1). Ihuenyo ahụ bụ azụ azụ, ọ nwere ọrụ nhazi onwe ya, yana ihe ruru 7 akpaaka nkezi, ruo 10000 wfms / s, 50 Mhz, 250 Msa / s, 8K ndekọ ihe, ụkpụrụ dị irè na ozugbo, multimeter nọọrọ onwe ya na ntinye oscilloscope, USB interface -C maka ike na ịchaji, wdg.
Kedu ihe bụ oscilloscope?
oscilloscopes Ha bụ ngwa eletrọnịkị nke a na-eji na-anọchi anya mgbanwe ọkụ eletrik dị iche iche na ihuenyo LCD ha. nke sekit, n'ozuzu akara na-adịgasị iche na oge na-anọchi anya na a nhazi axis (X maka oge axis ịhụ evolushọn nke mgbaàmà na na Y axis njupụta nke mgbaàmà na-anọchi anya volts, ọmụmaatụ). Ha dị mkpa n'ọhịa nke eletrọnịkị iji nyochaa sekit ma lelee ụkpụrụ mgbaàmà (analog ma ọ bụ dijitalụ), yana omume ha.
Oscilloscopes nwere nyocha ma ọ bụ ndụmọdụ iji nweta akara sekit a na-amụ. Igwe eletrọnịkị oscilloscope ga-elekọta na-anọchi anya ha anya na ihuenyo, na-enyocha site n'oge ruo n'oge mgbanwe (nlekọta), na site na njikwa mkpagharị ọ ga-ekwe omume ịkwado ma gosipụta ụdị ebili mmiri ugboro ugboro.
Nlele anya: bụ usoro iji tọghata akụkụ nke mgbaàmà na-abata n'ime ọnụọgụ eletrik dị iche iche iji chekwaa ya na ebe nchekwa, hazie ya ma gosipụta ya site na-anọchi anya ya na ihuenyo. Ọnụ ọgụgụ nke ebe nlele ọ bụla ga-adaba n'ogo nke mgbama ntinye n'oge a na-esepụta akara ngosi. Enwere ike ịkọwa isi ihe ndị a kpara nkata na ihuenyo dị ka ihe na-efegharị efegharị site na usoro a maara dị ka interpolation, na-ejikọta isi ihe iji mepụta ahịrị ma ọ bụ vectors.
Gbaa: A na-eji eme ka kwụsie ike ma gosipụta ụdị ikuku ugboro ugboro. Enwere ụdị dị iche iche dịka ịkpalite ihu, na-achọpụta ma ọ bụrụ na ọnụ na-ebili ma ọ bụ daa na mgbaama, dị mma maka akara square ma ọ bụ dijitalụ. Enwere ike iji mkpalite obosara usu iji nyochaa mgbama dị mgbagwoju anya karịa. Enwekwara ụdịdị ndị ọzọ, dị ka otu ihe na-akpali akpali, ebe oscilloscope ga-egosipụta naanị akara mgbe mgbama ntinye na-ezute ọnọdụ mkpali, na-emelite ihe ngosi na friza ya iji nọgide na-ahụ ya.
Mpempe akara ngosi
Oscilloscopes nwere ike tụọ usoro akara ngosi ị kwesịrị ịma:
ọnụ ahịa kacha elu
Ugboro mgbama (ma nke dị ala ma dị elu)
nchikota nke akara
Oge ịrị elu na ọdịda mgbaàmà
Kewapụ mgbama na mkpọtụ enwere ike ijikọ
Gbakọọ oge mgbasa na sekit microelectronic
Gbakọọ FFT nke mgbama
Hụ mgbanwe impedance
Banyere akụkụ ndị bụ isi nke oscilloscope nke ị ga-amarịrị ka ị nwee ike ijikwa ya, ha bụ:
Enwere ike ịdị iche n'etiti ụdị, mana ndị a na-abụkarị ndị a na-ahụkarị.
Ihuenyo: bụ usoro nnọchiteanya nke akara na ụkpụrụ. Ngosipụta a bụbu CRT na oscilloscopes ochie, mana na oscilloscopes ọgbara ọhụrụ ọ bụzi ihe ngosi LCD dijitalụ TFT. Ihuenyo ndị a nwere ike ịbụ nha dị iche iche, yana nwee mkpebi dị iche iche, dịka VGA, WXGA, wdg.
vetikal usoro: bụ ọrụ maka ịnye usoro ihe nnọchiteanya na ozi mgbaàmà maka axis Y ma ọ bụ axis vetikal. A na-egosipụtakarị ya n'ihu oscilloscope ma nwee mpaghara njikwa ya nke akpọrọ VERTICAL. Ọmụmaatụ:
Ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ kwụ ọtọ uru: Na-emezi nghọta kwụ ọtọ ma ọ bụ mgbe niile na volts/nkewa. A ga-enwe njikwa maka ọwa ọ bụla nke oscilloscope nwere. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịhọrọ 5V / div mgbe ahụ nkewa ihuenyo ọ bụla ga-anọchi anya 5 volts. Ị ga-emezigharị ya dabere na voltaji mgbaama, ka ọ nwee ike gosipụta ya nke ọma na eserese ahụ.
menu: na-enye gị ohere ịhọrọ n'etiti nhazi dị iche iche nke ọwa a họọrọ, dị ka ntinye ntinye (1x, 10x, ...), njikọ mgbaàmà (GND, DC, AC), uru, njedebe bandwit, ntụgharị ọwa (na-atụgharị polarity), wdg.
Ọnọdụ: bụ iwu a na-eji bugharịa akara mgbama ahụ kwụ ọtọ ma debe ya ebe ịchọrọ.
Fft: Fast Fourier Transform, nhọrọ iji ọrụ mgbakọ na mwepụ na-arụ ọrụ nyocha nke mgbaàmà. Yabụ ị nwere ike ịhụ mgbama gbajiri n'ime ugboro ole dị mkpa na harmonics.
Math: Digital oscilloscopes na-agụnyekarị ntọala a ka ịhọrọ ọrụ mgbakọ na mwepụ dị iche iche iji tinye aka na akara.
usoro kwụ ọtọ: bụ data a na-anọchi anya ya n'usoro, na-eji ọkụ na-ekpochapụ nke a na-eji chịkwaa ọsọ ịsachapụ na nke enwere ike ịhazi ya n'oge (ns, µee, ms, sekọnd, wdg). A na-achịkọta ntọala ma ọ bụ njikwa niile maka axis X a na mpaghara akpọrọ HORIZONTAL. Dịka ọmụmaatụ, dabere na ihe nlereanya ị nwere ike ịchọta:
Ọnọdụ: na-enye gị ohere ịkwaga mgbaàmà n'akụkụ axis X iji dozie ha, dịka ọmụmaatụ, tinye akara na mmalite nke okirikiri, wdg.
Escala: Nke a bụ ebe enwere ike ịtọ nkeji oge kwa nkewa ihuenyo (s/div). Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji otu n'ime 1 ms/div, nke ga-eme ka nkewa ọ bụla nke eserese ahụ nọchite anya oge nke otu millisecond. Enwere ike iji Nanoseconds, microseconds, milliseconds, sekọnd, wdg, dabere na uche na ọnụ ọgụgụ nke ihe nlereanya ahụ kwadoro. Enwere ike ịghọta njikwa a dị ka ụdị “mbugharị”, iji nyochaa nkọwa nkeji ọzọ nke mgbama n'obere oge.
Nnweta: A na-atụgharị data enwetara na usoro dijitalụ, nke a pụkwara ime n'ụzọ 3 ga-ekwe omume na ọ ga-emetụta ihe nlele ahụ, ya bụ, ọsọ nke data enwetara. Ụdị atọ a bụ:
Nlele anya: Nlele mgbama ntinye n'oge oge niile, mana ọ nwere ike tufuo ụfọdụ mgbanwe ngwa ngwa na mgbama.
Nkezi: Nke a bụ ọnọdụ akwadoro nke ukwuu maka mgbe enwetara usoro nke ebili mmiri, na-ewere nkezi nke ha niile ma gosipụta akara ngosi na-apụta na ihuenyo.
Nchọpụta kacha elu: kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibelata mkpọtụ jikọtara ọnụ nke mgbaàmà nwere ike ịnwe. N'okwu a, oscilloscope ga-achọ ihe kachasị na nke kacha nta nke mgbaàmà na-abata, si otú a na-anọchi anya mgbaàmà na pulses. Otú ọ dị, a ghaghị ịkpachara anya, n'ihi na n'ụdị a, ụda ejikọtara nwere ike ịpụta ibu karịa ka ọ dị n'ezie.
ịkpalite: usoro mkpali na-egosi mgbe anyị chọrọ ka mgbaàmà malite ịbịaru na ihuenyo. Dịka ọmụmaatụ, were ya na ị na-eji usoro oge 1 isi µs na X-axis graph of time nwere 10 kehoraizin nkewa, mgbe ahụ oscilloscope ga-akpa nkata 100.000 graphs kwa nkeji, na ọ bụrụ na onye ọ bụla na-amalite n'ebe dị iche iche ọ ga-abụ ọgba aghara. Ka nke a ghara ime, na ngalaba a ị nwere ike ime ya. Ụfọdụ njikwa bụ:
menu: onye na-ahọpụta maka nhọrọ dị iche iche ma ọ bụ ụdị agbapụ nwere ike ime (akwụkwọ ntuziaka, akpaaka,...).
Ọkwa ma ọ bụ Ọkwa: potentiometer a na-enye ohere ịhazigharị ọkwa mkpalite maka mgbama.
ike mkpata: manye ogbugba ahụ n'oge ịpị ya.
Ime nyocha: bụ ọnụ ma ọ bụ ihe nlele nke ga-ejikọta na akụkụ nke ngwaọrụ ma ọ bụ sekit ka a ga-enyocha. Ha ga-ezuru oke, ma ọ bụghị ya, eriri nke jikọtara nyocha na oscilloscope nwere ike rụọ ọrụ dị ka antenna wee buru akara parasitic site na ekwentị dị nso, ngwaọrụ eletrọnịkị, redio, wdg. Ọtụtụ nyocha na-abịa na potentiometer iji kwụọ ụgwọ maka okwu ndị a ma chọọ nhazigharị iji gosipụta ụkpụrụ ziri ezi na ngosipụta, kwekọrọ na akpịrịkpa ahọpụtara na anyụike ngosi.
Akụkụ ọzọ dị mkpa mgbe ị na-eji oscilloscope na ụlọ nyocha bụ iburu n'uche usoro nche ka ọ ghara imebi ngwaọrụ ma ọ bụ ihe mberede nwere ike imetụta gị. Ọ dị mkpa mgbe niile ịgụ akwụkwọ ntuziaka onye nrụpụta ka ị kwanyere ndụmọdụ maka nchekwa na ojiji. Ụfọdụ iwu ndị a na-ahụkarị na ụdị niile bụ:
Zere ịrụ ọrụ na gburugburu nwere ngwaahịa ọkụ ma ọ bụ ihe mgbawa.
Yiri ngwa nchebe ka ịzenarị ọkụ ma ọ bụ ọkụ eletrik.
Gbanye ala niile, ma nyocha oscilloscope na sekit a na-anwale.
Emetụkwala ihe sekit ma ọ bụ ndụmọdụ nyocha na-adị ndụ.
Jikọọ akụrụngwa mgbe niile na netwọọkụ ọkọnọ dị mma yana ala.
Ọ bụrụ na ị ka na-apụghị ịhụ ya ngwa Maka ngwaọrụ a, ị kwesịrị ịma ihe niile na-enye gị ohere ịme oscilloscopes na ụlọ nyocha eletrọnịkị gị:
Tụlee njupụta mgbaàmà
tụọ ugboro ugboro
Nkezi nke ngbanwe oge nke akara abụọ
Ntụle XY na-eji ọnụọgụ Lissajous
Ọfọn, na nke a gosipụtara n'ụzọ bara uru karị, enwere ike iji ya mee ihe:
Lelee akụrụngwa eletrọnịkị, eriri ma ọ bụ bọs
Chọpụta nsogbu dị na sekit
Lelee akara analọg ma ọ bụ dijitalụ na sekit
Kpebie ogo akara eletrọnịkị na sistemu dị oke egwu
Reverse engineering nke ngwá electronic
Na ọbụna oscilloscopes nwere ike ịgafe ngwa eletrọnịkị wee jiri ihe ha nwere tụọ ụfọdụ akara eletrik iji gbanwee ha na nyochaa usoro biomedical nke ndị ọrịa nọ n'ụlọ ọgwụ, dị ka ọbara mgbali elu, ọnụego iku ume, ọrụ akwara eletrik, wdg. Enwere ike iji tụọ ike ụda, ịma jijiji na ihe ndị ọzọ
E nwere dị iche ụdị oscilloscopes. Dịka ọmụmaatụ, dabere n'otu esi ewere nha mgbaàmà, anyị nwere:
Analog: voltaji a tụrụ site na nyocha ga-egosipụta na ihuenyo CRT, na-enweghị mgbanwe site na analog gaa na dijitalụ. N'ime ndị a, a na-ejide akara ngosi oge, ebe a naghị egosipụtakarị ihe ndị na-adịru nwa oge na ihuenyo, ọ gwụla ma a na-emegharị ha ugboro ugboro. Na mgbakwunye, ụdị oscilloscope a nwere oke, dịka na ọ naghị ejide akara ndị na-abụghị oge, mgbe ha na-ewere akara ngwa ngwa ha na-ebelata nchapụta nke ihuenyo n'ihi mbelata nke ume ọhụrụ, yana akara ndị na-adị ngwa ngwa. agaghị etolite akara (naanị nwere ike na tubes na-adịgide adịgide).
digital: dị ka ndị gara aga, mana ha na-enweta akara ngosi analog site na nyocha ahụ wee gbanwee ya na dijitalụ site na ADC (A/D Converter), nke a ga-edozi ya ma gosipụta ya na ihuenyo. Ha bụ ndị kacha gbasaa ugbu a nyere uru ha, dị ka inwe ike jikọọ na PC iji nyochaa nsonaazụ ya site na iji ngwanrọ, chekwaa ya, wdg. N'aka nke ọzọ, ekele maka sekit ha, ha nwere ike ịgbakwunye ọrụ ndị analọg na-enweghị, dị ka nha akpaka nke ọnụ ọgụgụ kasị elu, ọnụ ma ọ bụ etiti oge, njide na-agafe agafe, na mgbakọ dị elu dị ka FFT, wdg.
Enwere ike ịdekọ ha dabere na ibugharị ya ma ọ bụ ojiji ya:
obere oscilloscope: ha bụ kọmpat na ngwa ngwa, iji mee ka ha si n'otu ebe gaa n'ebe ọzọ iji mee nha. Ha nwere ike ịmasị ndị ọrụ nka.
Laboratory ma ọ bụ oscilloscope mmepụta ihe: ha buru ibu, ngwaọrụ benchtop, dị ike karịa ma haziri ka ahapụ ya n'ebe a na-edozi.
N'aka nke ọzọ, dị ka teknụzụ si dị eji, onye nwekwara ike ịmata ọdịiche dị n'etiti:
DSO (Oscilloscope Nchekwa dijitalụ): Oscilloscope nchekwa dijitalụ a na-eji usoro nhazi usoro. Ọ bụ ụdị a na-ahụkarị n'ime oscilloscopes dijitalụ. Ha nwere ike weghara ihe omume na-adịru nwa oge, chekwaa ya na faịlụ, nyochaa ha, wdg.
DPO (Digital Phosphor Oscilloscope): Ndị a enweghị ike igosi ọkwa ike nke mgbama ozugbo ka ọ na-eme na analọgụ, mana DSO enweghị ike. Ọ bụ ya mere e ji kee DPO, bụ nke ka bụ dijitalụ ma dozie nsogbu ahụ. Ndị a na-enye ohere ijide mgbaàmà ọsọ ọsọ na nyocha.
Nke sample: ahia elu bandwit maka ala ike nso. A naghị ebelata ihe ntinye ma ọ bụ gbasaa, na-enwe ike ijikwa akara ngosi zuru oke. Ụdị oscilloscope dijitalụ a na-arụ ọrụ naanị na mgbama ugboro ugboro, ọ nweghịkwa ike ijide transients gafere ọnụego nlele nkịtị.
MSO (Oscilloscope mgbama agwakọta): ha bụ ngwakọ n'etiti DPO na onye nyocha mgbagha nke ọwa 16, gụnyere ngbanwe na ịgbalite ụkpụrụ ụgbọ ala myirịta-serial. Ha kacha mma maka ịlele na debugging sekit dijitalụ.
PC dabere: A makwaara dị ka oscilloscope USB n'ihi na ha enweghị ngosi, mana dabere na ngwanrọ iji gosipụta nsonaazụ sitere na PC ejikọrọ.
Ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe ụdị ndị ọzọ, ndị a bụ ndị kasị ewu ewu, na ndị ị ga-ahụkarị.
Otu esi ahọrọ oscilloscope kacha mma
N'oge họrọ ezigbo oscilloscope, ị kwesịrị iburu n'uche ụfọdụ njirimara ndị a. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịhọrọ nke kacha mma na nke kacha mma maka ojiji gị:
Kedu ihe ị chọrọ maka oscilloscope? Ọ dị mkpa ikpebi ihe ị ga-eji ya, ebe oscilloscope iji nyochaa sekit dijitalụ n'ogo mgbagha abụghị otu maka RF, ma ọ bụ na ị ga-ebufe site n'otu ebe gaa na ọzọ, wdg. Na mgbakwunye, ọ dịkwa mkpa iji chọpụta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya maka iji ọkachamara ma ọ bụ maka ntụrụndụ. N'okwu nke mbụ, ọ bara uru itinye ego ntakịrị iji nweta ngwá ọrụ ọkachamara na nke ziri ezi. N'okwu nke abụọ, ọ ka mma ịhọrọ ihe nwere ọnụ ala dị ala.
Ego: ịmara ego ole ị nwere iji tinye ego n'ime akụrụngwa gị ga-enyere gị aka iwepụ ọtụtụ ụdị nke na-adịghị na mmefu ego ma na-ebelata ohere nke ohere.
Bandwit (Hz): Na-ekpebi oke akara ị nwere ike tụọ. Ị ga-ahọrọ oscilloscope nke nwere bandwit zuru ezu iji jide nke ọma ugboro kachasị elu nke mgbaàmà ị ga-arụ ọrụ. Cheta iwu nke 5, nke bụ ịhọrọ oscilloscope nke, yana nyocha ahụ, na-enye ma ọ dịkarịa ala 5 ugboro bandwit kachasị nke mgbaàmà ị na-atụkarị maka nsonaazụ kacha mma.
Ogologo oge (= 0.35/bandịds): Ọ dị mkpa iji nyochaa pulses ma ọ bụ square ebili mmiri, ya bụ, dijitalụ akara. Ka ọ na-adị ngwa ngwa, ka nha oge na-emeziwanye nke ọma. Ị ga-ahọrọ scopes nwere oge ịrị elu na-erughị 1/5 oge ịrị elu kacha ngwa ngwa nke mgbaàmà ị ga-eji.
Ime nyocha: Enwere ụfọdụ oscilloscopes nwere ọtụtụ nyocha pụrụ iche maka ihe dị iche iche chọrọ. Ọtụtụ n'ime oscilloscopes nke oge a na-abịa na nyocha na-agafe agafe dị elu yana nyocha na-arụ ọrụ maka nha ugboro dị elu. Maka oke ọkara ọ ka mma ịhọrọ nyocha nwere ibu capacitive nke <10 pF.
Ọnụego nlele ma ọ bụ ugboro ole (Sa/so Samples kwa nkeji): ga-ekpebi ugboro ole nkọwa ma ọ bụ ụkpụrụ nke ebili mmiri a ga-atụ na-eweghara kwa nkeji oge. Ka ọ dị elu, ọ ka mma mkpebi na ngwa ngwa ọ ga-eji ebe nchekwa. Ị ga-ahọrọ oscilloscope nke nwere opekata mpe 5x ugboro kachasị elu nke sekit ị ga-enyocha.
Ịkwalite ma ọ bụ ịkpalite: Kachasị mma ma ọ bụrụ na ọ na-enye ihe mkpali dị elu maka ụdị waveform dị mgbagwoju anya. Ka ọ ka mma, ọ ka mma ị ga-enwe ike ịchọpụta ihe adịghị mma ndị siri ike ịchọta.
Ogologo ebe nchekwa ma ọ bụ ogologo ndekọ (pts): Karia, mkpebi ka mma maka akara mgbagwoju anya. Na-egosi ọnụọgụ isi ihe enwere ike ịchekwa na ebe nchekwa, ya bụ, ikike ịchekwa nsonaazụ gara aga mgbe ị na-eme nnwale. Enwere ike ịdekọ ọnụ ọgụgụ nke ọgụgụ na ụkpụrụ niile nwere ike ịhụ iji nweta nkwubi okwu ziri ezi ma ọ bụ soro.
Onu ogugu: Họrọ oscilloscope na ọnụọgụ ọwa kwesịrị ekwesị, ka ọwa na-abawanye, enwere ike nweta nkọwa ndị ọzọ. Ndị analọgụ na-abụbu naanị ọwa 2, ebe ndị dijitalụ nwere ike isi na 2 gbagoro.
Okwu: Ọ kwesịrị ịdị mfe nghọta ma dị mfe dịka o kwere mee, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido. Ụfọdụ oscilloscopes dị elu dị mma maka ndị ọkachamara, ebe ọ bụ na onye ọrụ na-enwechaghị ahụmahụ ga-achọ ịgụ akwụkwọ ntuziaka mgbe niile.
Analog na dijitalụ: ndị dijitalụ na-achịkwa ugbu a n'ahịa n'ihi uru ha, dị ka ikwe ka ịdị mfe dị ukwuu, na enweghị njedebe na ogologo oge ndekọ ahụ. Ya mere, nhọrọ kacha mma kwesịrị ịbụ oscilloscope dijitalụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpe niile.
Dsdị: Ụdị oscilloscope kacha mma bụ Siglent, Hantek, Rigol, Owon, Yeapook, wdg. Ya mere, ịzụrụ otu n'ime ụdị ha ga-abụ nkwa nke ịrụ ọrụ dị mma na ịdị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Oscilloscopes kacha mma maka ọrụ eletrọnịkị gị
Akwụkwọ iri na abụọ kacha mma na Arduino iji mara bọọdụ a na mmemme ya nke ọma
Ụdị igwe CNC niile dị ka ojiji na njirimara si dị